Apple inotiratidza itsva watchOS 7 spheres muvhidhiyo | Ndinobva mac
Kutanga pa kanomwe masikati ano Isu tava kukwanisa kugadzirisa yedu Apple Tarisa kuOSOS 7. Asi panguva ino ichave isiri pim pam pum. Kutanga isu tinofanirwa kugadzirisa yedu iPhone kune iOS 14, zvikasadaro isu hatizo "ona" iyo inowanikwa yekuvandudza yeiyo smartwatch.
Saka masikati ano, panguva yekola-cao, tichava nechikafu, tichazvishingisa nekushivirira, uye isu tinotanga kumutsiridza yedu iPhone. Kamwe kakatovandudzwa ku iOS 14, usatambe uchitenderedza nemawijeti matsva. Unenge uine nguva. Gadziridza wachi yako. Zvichakadaro, iwe unogona kutarisa iyi vhidhiyo nemitsva nyowani kusarudza yekutanga yauri kuenda kuyedza. Kuti kana, ini handizive kuti inguvai ...
Apple yakaburitsa vhidhiyo nezvose zvitsva zvikamu zvatichawana mukati WatchOS 7. Unogona kuitarisa pa ... iyo iPad iwe uchigadzirisa yako iPhone kune iOS 14 uye wozovandudza iyo Apple Watch kuti itariseOS 7. Siya iyo iPad yekupedzisira kwekupedzisira, manheru ano.
Yakataurwa na Alan Dye, Mutevedzeri wemutungamiriri weApple dhizaini yemunhu dhizaini, iyo 90-yechipiri vhidhiyo inotitora kupfuura yega yega wachi yekutarisa inowanikwa muWatchOS 7, kubva kuPro chronograph kumeso neyakavakirwa tachymeter kune yakajeka uye yakanyanya customizable wachi yekutarisa. .
Mhando dzakasiyana dzemawadhi matsva dzakatarisa muwatchOS 7 inokupa dzimwe nzira dzekuita yako Apple Watch kupfuura nakare kose. Semuenzaniso, iwe unowana mamwe mavara uye kuomarara sarudzo dzemawachi maficha. Imwe chete watchOS 7 app inogona kupa ikozvino matambudziko mazhinji, kwete imwe chete, ichiwedzera sarudzo dzekugadzirisa.
"Kana iwe uri surfer, unogona kuwana saizi yekuzvimba, kudziya kwemvura uye nekumhanyisa kwemhepo kubva pachishandiswa chimwe chete," sekureva kwaApple. Kubva ikozvino zvichienda mberi, unogona kuwana zviso zvitsva muApp Store kana kuzvitsvaga pasocial media nemawebhusaiti. Uye zvakare, watchOS 7 inokutendera iwe share zviso iyo yawakagadzira nekutumira mameseji, kutumira tsamba, kana kutumira chinongedzo online.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotiratidza ese matsva mawOSOS 7 mabhora muvhidhiyo